Jean-Michel Cousteau Resort, Fiji Ankehitriny dia mandray ireo vahiny tafaverina, misokatra indray ho an'izao tontolo izao
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Fidji » Jean-Michel Cousteau Resort, Fiji Ankehitriny dia mandray ireo vahiny tafaverina, misokatra indray ho an'izao tontolo izao
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana Fidji • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • fanorenana • Resorts • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia
Resort Resort Jean-Michel Cousteau
Jean-Michel Cousteau Resort, Fiji, toeram-pialan-tsasatra an-tsokosoko voalohany any Pasifika atsimo, dia vonona ny handray tsara ireo vahiny voalohany taorian'ny nanakatonana ireo mpitsangatsangana iraisampirenena amam-bolana, noho ny areti-mandringana. Jean-Michel Cousteau Resort dia mpitsangatsangana amina tropikaly tropikaly sy marefo ao amin'ny nosy Vanua Levu izay mitazana ny rano milamina ao amin'ny Helus Savusavu Bay ary famerenana lafo vidy taorian'ny faran'ny volana nijanona teny akaikin'ny trano.
Manantena ny hisokatra indray i Fiji amin'ireo mpitsangatsangana iraisampirenena (ao anatin'izany ireo mpandeha avy any Etazonia) hatramin'ny volana Novambra.
Ny toeram-pialofana eco-rendez-volo ao amin'ny Nosy Vanua Levu any Pasifika atsimo dia manolotra traikefa nahafinaritra sy traikefa iray.
"Faly izahay fa handray tsara ireo vahininay sy ireo namanay niverina ao amin'ny Resort Jean-Michel Cousteau," hoy i Bartholomew Simpson, Tale Jeneralin'ny Resort Jean-Michel Cousteau, Fidji. “Tsy andrintsika ny hahita ny hafaliana amin'ny endrik'izy ireo sy handrenesana ny fihomehezana rehefa mitsidika ny nosinay indray izy ireo hankafy sy hijery ireo zava-mahatalanjona voajanahary tsy mampino any amin'ny alàlan'ny Pasifika atsimo. Nandritra io fotoana tena tsy mbola nisy toy izany teo amin'ny tantarantsika io dia niasa tsy niasa ireo mpiasa tao amin'ny toeram-pialan-tsasatra mba hitazonana ny hakanton'ilay trano ary hitahiry ny fanolorantenantsika ny tontolo iainana. Vonona izahay hanome ny vahininay fialan-tsasatra mahafinaritra sy tsy hay hadinoina. ”
The Resort Resort Jean-Michel Cousteau vaksiny feno, voaofana ary manolo-tena hihoatra ny avo indrindra amin'ny fenitra fiarovana sy fidiovana COVID-19 ny mpiasa raha manome serivisy ho an'ny mpanjifa matihanina sy mandray azy ireo. Ny mpiasa dia hiarahaba ny vahiny amin'ny fonony, ary amin'ny tranga sasany fonon-tànana, ary miantoka ny elanelana ara-tsosialy sy ara-batana. Ho fanampin'izay, ny faritra rehetra mikasika ny avo dia voadio sy diovina matetika.
Ho fanampin'izany, namorona ny “Fanoloran-tena Fiji fikarakarana, ”Fandaharana iray misy protokolà fiarovana, fahasalamana ary fahadiovana nohatsaraina ho an'ny tontolo aorian'ny areti-mandringana raha eo am-piomanana hanokatra sisin-tany ho an'ireo mpandeha ny firenena. Ny programa, natao hanampiana amin'ny fanalefahana ny fiparitahan'ny COVID-19, dia noraisin'ny 200 mahery amin'ireo toeram-pialantsasatra, mpikirakira fizahan-tany, trano fisakafoanana, toerana manintona ary maro hafa.
Raha mila famandrihana sy fampahalalana bebe kokoa momba ny Resort Jean-Michel Cousteau, tsidiho azafady fijiresort.com.
Ny Resort Jean-Michel Cousteau nahazo loka dia iray amin'ireo toerana fialantsasatra malaza any Pasifika atsimo. Any amin'ny nosy Vanua Levu ary miorina amin'ny velaran-tany 17 hektara dia tsy tazana ny rano milamina Savusavu Bay ary manome fialofana manokana ho an'ny mpivady, fianakaviana ary mpitsangatsangana mitady fitsangatsanganana miaraka amin'ny haitraitra sy kolontsaina eo an-toerana. Jean-Michel Cousteau Resort dia manolotra traikefa vakansy tsy hay hadinoina izay nalaina avy amin'ny hatsarana voajanahary ao amin'ny nosy, ny fiheverana manokana ary ny hafanan'ny mpiasa. Ny trano fandraisam-bahiny tompon'andraikitra amin'ny tontolo iainana sy ara-tsosialy dia manolotra fanamoriana isan-karazany ho an'ny vahiny, ao anatin'izany ny toeram-pitrandrahana tafo vita amin'ny bozaka, fisakafoana kilasy an'izao tontolo izao, filaharam-pialan-tsasatra miavaka, traikefa ekolojika tsy manam-paharoa, ary karazana fitsaboana spaoro ampiasain'ny Fijiana. fijiresort.com
Momba ny Canyon Equity LLC
Ny Canyon Group of Companies, izay tompon'ny trano fandraisam-bahiny, izay manana foibe any Larkspur, California, dia natsangana tamin'ny Mey 2005. Ny mantra-ny dia ny mahazo sy mamolavola resabe misy marika lafo vidy amin'ny toerana tsy manam-paharoa miaraka amina singa kely mipetraka izay mamorona heviny eklektika nefa mifanentana be ny vondrom-piarahamonina isaky ny toerana itodiana. Hatramin'ny niforonany tamin'ny taona 2005, Canyon dia namorona portfolio resorts mahavariana, amin'ny toerana manomboka amin'ny rano turquoise any Fiji, hatrany amin'ny tampon'ny Yellowstone, hatrany amin'ireo zanatany mpanakanto ao Santa Fe, ary any amin'ny Canyons atsimon'i Utah.
Ny portfolio an'ny Canyon Group dia misy endrika mampiavaka azy toa an'i Amangiri (Utah), Amangani (Jackson, Wyoming), Four Seasons Resort Rancho Encantado (Santa Fe, New Mexico), Jean-Michel Cousteau Resort (Fiji), ary Dunton Hot Springs, (Dunton , Colorado). Misy fivoarana vaovao manaitra vaovao koa miseho any amin'ny toerana toa ny Saikinosin'i Papagayo, Costa Rica, ary Hacienda 400 taona any Mexico, izay natao hametraka fanambarana lehibe eo amin'ny tsenan'ny zotram-pitaterana iraisam-pirenena tena lafo vidy rehefa natomboka ny tsirairay . canyonequity.com